Izindaba - Isikali, ukukhula, ukuhlaziywa kanye nesibikezelo sango-2030 somkhakha wezokukhiqiza ophezulu enkabeni yezokuthutha emakethe
Ukwanda okwethusayo kwenani lamacala e-COVID-19 emhlabeni wonke kanye nokunganele kwengqalasizinda yokuhlola esekwe elebhu yizinto ezibalulekile ezikhuthaza ukusetshenziswa kwama-swabs amasha kanye nemidiya yokulethwa kwamagciwane. Ngaphezu kwalokho, izinhlaka zikahulumeni zifuna ukuvunyelwa ngokushesha kwemikhiqizo emakethe ukuze ingene ngokushesha emakethe evulekile. Lezi zimfashini zizosekela imakethe yemidiya yezokuthutha ngegciwane kuze kube sekupheleni kobhadane.
Ngesikhathi sokubikezela kusuka ku-2020 kuya ku-2030, imakethe yemidiya yokudlulisa ama-swab kanye ne-virus kulindeleke ukuthi ikhule kancane ngezinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe le-1.2%. Ukwanda kwezifo ezithathelwanayo nokwanda okukhulu emadolobheni anabantu abaningi kukhulise ukufunwa kwama-swabs nemidiya yokulethwa kwamagciwane. Ngisho nangemva kokuba ubhadane seluphelile, izindlela ezintsha ngokunemba, imiphumela esheshayo, nokusebenziseka kalula Izophinde inikeze ukwesekwa embonini.
“Ekuqaleni kuka-2020, i-US FDA yakwamukela ukusetshenziswa kwezingodo zokwenziwa zokuhlola i-coronavirus. Lokhu kuvumela iziguli ezingaba namandla okuzihlola, ngaleyo ndlela zinciphise ukuvezwa kwaleli gciwane kochwepheshe bezokwelapha. Ngaphezu kwalokho, abenzi bakhulisa ngamandla i-polyester Swabs ukuhlangabezana nesidingo esikhulayo sokuxilongwa kwe-COVID-19, ”kusho abahlaziyi be-FMI.
Abakhiqizi bezindaba be-swab ne-virus abakhulu balwa kanzima ukuhambisana nesidingo esikhulu somhlaba jikelele. Yize uhulumeni exhasa futhi esiza ngezezimali, noma ngabe abakhiqizi bezama ukwandisa umkhiqizo, ukushoda kungathinta imakethe. Ngaphezu kwalokho, ama-swabs asetshenziselwa ukuhlolwa kwe-COVID-19 adinga ukwakheka nezinto ezihlukile, ezizothinta amathemba emakethe.
Ukuphazanyiswa kokuphakelwa kwempahla eluhlaza njengoplastikhi nama-reagents kuthinta ukutholakala kwama-swabs nemidiya yokuhambisa amagciwane ezibhedlela nasemitholampilo. Ngakho-ke, uhulumeni uyalela izinsiza kusebenza zokukhiqiza ukuhlangabezana nesidingo esikhulayo sokuhlolwa. Ngakolunye uhlangothi, ukufunwa okuphezulu kwemikhiqizo ehlobene ne-COVID-19 kuthinta imidiya yokuhambisa amagciwane kanye nezokuthuthwa kwamagciwane ezinye izifo, ngaleyo ndlela kuthinte ukukhula kwemakethe. Ukulawula ubhadane kubalulekile ekugcineni izinga lokufunwa ngaphambi kokuqubuka kwe-coronavirus.
Abakhiqizi abaphezulu emakethe yemidiya yezokuthutha esatshalalisiwe basabalalisela ukukhishwa kwemikhiqizo emisha futhi batshala imali ekukhuphuleni amandla okukhiqiza ukukhiqiza imithombo emisha yemali engenayo.
I-Huida Medical, njengomhlinzeki oqeqeshiwe wemishini yezokwelapha nezinto ezisetshenziswayo, ayikwazi ukuhlinzeka amakhasimende kuphela ngezixazululo eziphelele zezinsimbi zezinto zokuhamba nemishini, futhi alwele ukusetshenziswa kwezinto zaselebhu zepulasitiki, singanikeza uhla oluphelele lwemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezihlobene . Uyemukelwa ukuthumela uphenyo ukuze ufunde kabanzi.